Izizathu ezi-5 zokufunda iincwadi zamaphepha | Uncwadi lwangoku
Izizathu ezi-5 zokufunda iincwadi zamaphepha
UAlberto Legs | | Iincwadi, Iincwadi
Nangona uninzi lwethu luthanda ukucinga ekuqaleni ukuba i-ebook ingcolisa incwadi engaphantsi kwephepha, izifundo ezinje nge "Umthi, iplanethi, iphepha", olwenziwe yiSpanish Association of Pulp and Paper Manufacturers, iqinisekisile ukuba iphepha lephepha lingcolisa ngaphantsi kwemizuzu engama-30 yokufunda kwi-Intanethi, isiphumo esisekwe kuphononongo olwenziwe IZiko lobuGcisa beTekhnoloji eSweden e 2007.
Nangona ndinokulibala ukucinga ukuba ngamanye amaxesha zimbalwa izifundo ezinomdla xa kusiziwa ekwabelaneni ngazo Izizathu ezi-5 zokufunda iincwadi zamaphepha.
1 Ivumba lakhe
2 Ukuphucula uxinzelelo
4 Ubugcisa bokukrwela
Zimbalwa iimvakalelo ezinokuthelekiswa naleyo siyifumana xa sivula incwadi kwaye nevumba elisisa kwenye indawo ebuntwaneni, nokuba lixesha, liyaphuma. Ivumba lomxholo omtsha phakathi kwamaphepha, ezindala, uyolo oluncinci uninzi lwethu oluqhubeka ukukhuthaza nanamhlanje xa sisondela kwithala leencwadi elidala okanye kwiincwadi ezivulekileyo ezigcinwe kweyona shelufa ithandwayo kwivenkile yethu yeencwadi.
Abantu abazalelwe kwiminyaka yedijithali banokufumana umohluko omncinci phakathi kokufunda ephepheni okanye ukufunda ngokwamanani. Nangona kunjalo, abo bethu bahlala befunda ephepheni bayaqhubeka nokuziva bekhululekile kulawo maphepha aluhlaza, ngaphandle kwee-hyperlink kunye nokuphazamiseka. Inyani ehlukunyezwa zizifundo ezinje ngala UNahomi baron, umbhali wencwadi Amagama kwiscreen: Indawo ekufundwa kuyo kwihlabathi ledijithali, apho iipesenti ezingama-94 zabafundi abangama-400 abathathe inxaxheba kwiyunivesithi baqinisekisile ukuba bagxila ngcono ephepheni kunakwifomathi yedijithali.
Zingaphi iincwadi zoobawo esingazifundanga? Bangaphi abangadlulanga kwesinye isizukulwana baye kwesinye? Kwaye leyo umhlobo olungileyo wakuboleka yona xa uhamba ngexesha elibi? Iincwadi zamaphepha zivusa indalo yamabali oza kwabelana ngawo, uboleke. Benze bagqibe ngokuhamba kwexesha njengobuncwane bakho.
Uninzi lwethu ludla ngokuba nepensile xa siqala ukufunda incwadi. Kwimeko yam, ndikrwelela amabinzana anokundikhuthaza ukuba ndenze amabali amatsha, iikowuti zokukhumbula kwakhona ngamaxesha anzima okanye ezinye ezikwenza ukuba uthandane, zikwenze ukuba uhambe kwaye unikeze isifundo. Kwaye sonke siyazi ukuba ukuvula incwadi kunye nokufumana zonke ezo zichazi njengoko ixesha lihamba alinanto yakwenza no-Evernote, okanye i-padding onokuyifaka kwibinzana kwiLizwi ukuyicacisa.
Iincwadi zombane zinezibonelelo ezininzi. Ngapha koko, olu hlaziyo alwenzelwanga ukuba luchaphazele le ndlela intsha yokufumana uncwadi. Kodwa ngekhe uyikhanyele, ngokungafaniyo ne-ebook, incwadi yamaphepha ayifuni ibhetri okanye iWi-FiAkukho nakuwuphi na umthombo wamandla wangaphandle ngaphandle komnqweno wethu wokuqhubeka nokwenza le ncwadi ibe ngumhlobo wakho oza kuhamba nayo kwaye ayisebenzise kweyona ndawo ilahlekileyo emhlabeni.
Ngaba ukhetha ukufunda iincwadi zamaphepha okanye iincwadi zeencwadi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Izizathu ezi-5 zokufunda iincwadi zamaphepha
U-Israeli de la Rosa sitsho
Kwiphepha, ewe. Ewe, iincwadi. Kodwa iincwadi zokwenene. Ukufunda kukaVictor Hugo akufani nokufunda nayiphi na ingxelo yeli xesha.
Phendula u-Israel de la Rosa
Ulujiye kangakanani uluvo lwakho. Ayizizo zonke izinto ezikhoyo ngoku kwaye ayisiyiyo yonke into ebhalwe nguVictor Hugo ngumsebenzi wobugcisa.
UDiego Deltell sitsho
Ulungile. Ayizizo zonke izinto ezikhoyo ngoku eziphakathi. Uninzi lweencwadi ezibhalwe ngababhali abangafundanga.
Phendula u-Diego Deltell
USusana garcia sitsho
Incwadi ephepheni! Ngonaphakade! Akukho nto ithelekiswa nokuba nencwadi ezandleni zakho, umbono wesahluli sephepha, uyivule kwaye ubuyele kufundo lwakho, ungene kwi-adventure yakho ehlanganiswe kwimakhishithi!
Inqaku elilunge kakhulu.
Phendula uSusana García
Ndizifunde zombini, kodwa ndizifumana ephepheni ezo ndingathanda ukuzifunda kwakhona.
Ndihlala ndikhetha ephepheni, kodwa ndiyaqonda ukuba i-elektroniki ikulungele ukuhamba
UMarlyn camacho sitsho
Andikholelwa ukuba eli linqaku lakutshanje. Uza kubeka njani ukrwelele inzuzo yakho? Luhlobo luni lwefomathi ye-e oyisebenzisileyo? YiPDF kuphela?
Ndifunde kuhlobo kwaye ngokuqinisekileyo ndinokukrwelela zonke izicatshulwa, amabinzana, izivakalisi kunye nemihlathi. Ndingazikrwelela kwaye ndongeze inowuthi kubo, ndikrwelele umgca phantsi kwaye wabelane nabo kwimidiya yoluntu, okanye ukope nje kwaye uncamathisele. Ngapha koko, uhlobo luya kuvelisa uxwebhu kunye nazo zonke izinto ezibalulekileyo ozenzayo kuzo zonke iincwadi ozifundileyo kwaye unokufikelela kolo xwebhu kwaye ulukope okanye wabelane ngalo.
Olunye uncedo olukhankanyileyo "unokubolekwa" ndibuyela umva ndibuze, nzulu? Ubuncinci iAmazon ibonelela ngamathuba okubolekisa ngeencwadi ozithenga ngokusemthethweni kuye nawuphina umsebenzisi, awudingi ukuba noluhlobo, iakhawunti kuphela eAmazon kwaye usebenzise iapp ye-Kindle kwi-pc yakho, ithebhulethi, i-smartphone, kwaye eyona nto ilungileyo Ndiqinisekile ukuba ndiza kubuya kuba iAmazon iyakukhathalela ukuyirhoxisa ngexesha elimiselweyo (endicinga ukuba yinyanga okanye iintsuku ezili-15)
Kwaye malunga "abanalo ibhetri" ulungile, abanayo! kwaye oko? Ukuba ndithatha i-kindle yam kwaye ndineencwadi ezininzi ezikhutshelweyo apho, ndiyagqibezela okanye ndiyakruquka yile ndiyifundayo, ndivule enye nenye kwaye yiyo ke leyo. Ngelixa ndithatha elinye ephepheni kwaye liyandidina okanye ndiyaligqiba, kufuneka ndilinde ukubuyela ekhaya.
Akunyanzelekanga ukuba ndixhume kwi-Wi-Fi ukuze ndiyifunde, ukuyikhuphela kwaye abafundi be-e banobomi obude bebhetri, abo bangahlali ixesha elide ziipilisi.
Inye kuphela into endikunika yona kukuba "banevumba." Kodwa masikhe siyeke ukukhangela into esahlulayo size sigxile kwinto esidibanisayo. Zininzi izibonelelo ezininzi ezinokufundwa kwidijithali. Ngaba uyazi ukuba yeyiphi eyona ilungileyo? Ukuba i-e-ncwadi ayinguye umzalwana omkhulu onomona kwaye esoyika ukufuduswa.
Phendula uMarlyn Camacho
UKarl Kent sitsho
Ilayibrari yam ebonakalayo ifikelela kwi-5.347 yeencwadi. Ndineencwadi ezininzi kumagumbi ahlukeneyo kunye neeshelfu ezininzi kunelayibrari ezininzi endizaziyo. Kwaye zonke ziincwadi zokwenyani, ezibalaseleyo. Nangona kunjalo, elo nani alinayo ne-1% yeencwadi endinazo kwifomathi ezahlukeneyo zedijithali. Uncedo olukhulu lwefomathi yedijithali kukugcina indawo… Yonke into ingena ngokufanelekileyo kwi-1 Terabyte USB.
Phendula uKarl Kent
U-Oscar Dante Irrutia sitsho
Ngaphandle kwamathandabuzo, le ncwadi isasebenza ngakumbi. Ubuncinci kubathandi beencwadi ezindala. Nditshintsha ngakumbi inguqulelo ye-elektroniki, ukusukela kwilayibrari yam yolutsha ngokwesiko- apho bendihlala ndibaleka ngasemva-, bendiyigqiba ndibulela kwizibonelelo zedijithali. Nokuba yeyiphi indlela, njengoko imbali isifundisa, ezi fomathi ziya kuhlala ixesha elide. Kuya kufuneka sithathe ithuba kwaye sigxile kwingxoxo-mpikiswano hayi kwinkxaso kodwa kumxholo: ukukhuthaza, ukukhuthaza, ukukhuthaza kunye nokukhupha loo ndawo ibizwa ngokuba kukufunda.
Phendula u-Oscar Dante Irrutia
_Imidlalo yeethrone_. Ufunda ntoni uJon Snow? Yodwa kunye neKit Harington
Iinyanga zeWuthering_, nguEmily Bronte. 6 ubuso bukaKatherine Earnshaw kunye noHeathcliff